TORITENY Alahady 23 Jolay 2017 | FJKM Amboniloha
TORITENY Alahady 23 Jolay 2017
« Manaiky ho vavolombelon’ny Tompo ny irany. »
Malakia 3 : 1 – 7 / Matio 24 : 1 – 11 / Asan’ny Apostoly 14 : 1 – 10
Matoa aho manao ny asan’Andriamanitra dia hanomanako ny ho aviko izany. Ho avy haka ny zanany mantsy Jesoa Kristy ary hitsara ny velona sy ny maty ka izay mahatoky sy manompo tsara ihany no voavonjy fa izay ratsy fanahy kosa dia ho ringana.
I- Tsy maintsy mari-pototra ny fivavahana
Inona avy no resaka ambaran’i Jesoa mikasika ny fiverenany ?
Hamboatra fitoerana ho Azy Izy. Jao 12
Any an-danitra no fanjakana Fil 3 : 20 (Anton’ny fiverenan’i Jesoa ny handray ahy hiaina ao amin’ny fanjakan’ny lanitra)
Tena ara-bakiteny sy marina ny fiverenan’i Jesoa Asa 1 : 14
Hita maso ary henon’ny sofina ny fiverenany Apok 1 : 7 / I Tes 11 : 16
Misy famantarana maro alohan’ny hiavian’ny Jesoa Kristy fa ny fenitra farany dia ny Fampielezana ny Filazantsara ho ren’ny olona rehetra. Miova mantsy ny olona rehefa miha antomotra ny andro cf ITim 3 : 5 (misy ny mpampianatra marina sy ny mpampianatra sandoka). Mila miomana amin’ny toe –panahy araka an’Andriamanitra sy ny fiainana tanteraka izay ambaran’ny Filazantsara isan’andro aho mba ho vonona amin’ny fitsenana an’i Jesoa Kristy amin’ny fifalina fa tsy handositra noho ny tahotra.
III- Inona no tokony ataoko manoloana ny asa fanompoana
Inona no manosika ahy hanao ny asan’Andriamanitra vola , voninahitra …Kol 3 : 23
Tena azoko antoka ve ny fibanjinako ny fihavian’i Jesoa Kristy?
Mila miezaka araka izay tratry ny heriko aho hahatanteraka asa tsara ho an’ny Tompo.Tsy ho karama na ho voninahitra sanatria fa tena endriky ny fanoloran-tena marina sy masina. Mpiara –miasa amin’Andriamanitra aho ary mpiombona ao amin’ny Tompo.
Ho avy ny Tompo ka hanadio antsika . Ho hita eo izay hosoka sy tena mpanompo mahatoky sy marina.
Aoka isika hangataka amin’ny Tompo mba hanana faharetana sy tsy hivadibadika amin’ny fanarahana ny Tompo sy ny fiainana ny Filazantsara mba ho maro no voavonjy.
ANDRIANARISOA Hajaniaina Céléstin , Mpitandrina
Catégories :	Soratra Masina, Toriteny	/ par AnjGab 30 juillet 2017